Ngabe ekuseni ngemuva kwephilisi kubambezeleka isikhathi? Thola ku-Inthanethi 🥇
Ngabe ekuseni ngemuva kwephilisi kubambezeleka isikhathi?
Thola ku-Inthanethi Septemba 16, 2019 Ezempilo Awekho amazwana
Yebo .. Iphilisi lasekuseni ngemuva kokuqeda umjikelezo wokuya esikhathini, futhi lokhu akumele kube yisizathu esikhethekile sokukhathazeka kowesifazane olisebenzisile.
Ukusa ngemuva kwephilisi, noma ngokuphuthumayo, Inama-hormone amaningi, okuvimbela ukukhulelwa uma kusetshenziswe kahle emahoreni okuqala angamashumi ayisikhombisa nambili emva kocansi.
Ekuseni ngemuva kokuba iphilisi linokungahambi kahle kokuya esikhathini
Kodwa-ke, ngenxa yaleli zinga eliphakeme lama-hormone, kujwayelekile ukwethula ukungahambi kahle kokuya esikhathini, njengokubambezeleka, isikhathi esingaphezu kwamasonto amane (inyanga eyi-1) noma, njengomthetho, ngaphambi kosuku olulindelekile. Balindelwe ushintsho, abaphakamisi noma yikuphi ukuphazamiseka. Kungadala nemiphumela emibi, isicanucanu, ukuhlanza kanye nekhanda, phakathi kwezinye izinkomba ezihambisana ne-PMT.
Uma uhlanza, ngaphambi kokuthatha iphilisi, kungakuhle ukuthi uphinde uphuze umthamo womuthi. Futhi uma ukubambezeleka kokuya esikhathini kuthatha isikhathi esingaphezu kwamasonto amane, udokotela kufanele acelwe ukuthi aqiniseke ukuthi konke kuhamba kahle.
Akunandaba nesikhathi sokulibala, noma uhlobo lokopha okwenzeka, ngenkathi kungalawulwa umjikelezo wokuya esikhathini, kubalulekile ukuthi usebenzise indlela yokuvimbela inzalo, mhlawumbe inqubo evimbayo, efana nehembe (lowesifazane noma lowesilisa), ukugwema, ngaphandle kokukhulelwa okungakahlelwanga, ingozi yokungcola kwesifo esithathelwana ngocansi (i-DSTs), njenge: syphilis, i-blenorrhea, i-gonorrhea, i-herpes, ingculaza, phakathi kwabanye.
Ukuphela kwendlela yokugwema ama-STDs ukusebenzisa izithiyo zokuvimbela inzalo ebudlelwaneni obusondelene nobunye, njengoba kunjalo ngamakhondomu abesilisa nabesifazane.
Khumbula, uma unombuzo kunoma yiluphi udaba oluhlobene nokudla iphilisi ngakusasa, unganqikazi ukubonisana nochwepheshe futhi, uma kunesidingo, gcina ukulandela udokotela.
Landa i-Minecraft Pocket Edition
Umkhuleko oMark Mark ka Leon
Ukufundwa kwamahhala kwe-Psychic
Ikhambi elenziwe elenziwe nge-fungus fungus
I-Gastritis: izici zobungozi nokuvimbela
Ukwehluleka okujwayelekile ejimini
Amehlo abomvu: -. .
Uvivinyo lokungazali kwabesifazane
Umdlavuza we-pancreatic: izimpawu nokwelashwa
Ukuqina kokuqina kwesisu okuhlanganisiwe: izimbangela kanye nokwelashwa
Izifo ezintsha zikagwayi